Mgbakwunye n'ichepụta: ihe niile ị chọrọ ịma banyere nke a Usoro | Akụrụngwa n'efu
Mgbakwunye n'ichepụta: ihe niile ị chọrọ ịma banyere nke a Usoro
Isaac | | Nkọwa 3D
La mmako n'ichepụta mgbe ụfọdụ ọ na - agbagwoju anya na usoro obibi akwụkwọ 3D. Ma ọ bụ na, ha nwere ike iyi otu ma ọ bụrụ na ị na-ele anya na nkọwa ha, ma ọ bụ mbipụta 3D n'onwe ya ka enwere ike ịtụle dị ka usoro mgbakwunye mgbakwunye.
Thatbụ na ọ nwere ike, ebe i nwere ike ịghọta myirịta, iche na Ihe niile ị kwesịrị ịma banyere usoro a maka imepụta ihe na akụkụ atọ site na ịtinye akwa n'elu akwa nke ihe.
1 O bu ya na 3D ebiputara?
2 Gịnị bụ mmako n'ichepụta?
3 Gịnị dị mkpa maka n'ichepụta usoro?
O bu ya na 3D ebiputara?
La Nkọwa 3D na-ewu ewu usoro imepụta mgbakwunye n'ụlọ, yana anụ ụlọ 3D, yana na ụlọ ọrụ, ebe ọ bịara gbanwee ụzọ e si wuo ihe ruo ugbu a.
Agbanyeghị, ọ bụ ezie na mbipụta 3D jiri mmako n'ichepụta usoro, ọ bụghị ihe mgbakwunye niile nwere ike ịtụle mbipụta 3D. Nke a bụ ebe nnukwu ọdịiche dị.
Ọ bụrụ na ị lelee ụzọ onye nbipute 3D na-arụ ọrụ, ị ga-ahụ na ọ na-enweta ihe nlele site na faịlụ ahụ nwere onyonyo a ga-ebipụta. Site na data a, ọ ga-ebugharị isi ya tinye akwa site na oyi akwa nakwa na ọ na-ewere olu site na efu ruo mgbe ịnwe mpempe akwụkwọ ikpeazụ.
Ihe dị nnọọ iche na ndị ọzọ omenala usoro imepụta akụkụ 3D, dị ka ebu, ịkpụzi igwe, wdg, ebe naanị akụkụ nke ihe mgbagwoju anya nwere ike mepụta, ebe na usoro mgbakwunye enwere ike ịmepụta geometries dị mgbagwoju anya karị, mepee ohere ọhụụ na-adịghị agwụ agwụ, site na imepụta site na akụkụ dị mfe, na iwu ulo nke eji 3D ebiputa ...
Gịnị bụ mmako n'ichepụta?
La mmako n'ichepụta Ọ gụnyere ọtụtụ teknụzụ, ha niile nwere ihe jikọrọ ya, nke ahụ bụ na a na-atụnye ya "ntakịrị" n'oge usoro ahụ ruo mgbe enwetara nsonaazụ ikpeazụ. N'ime usoro ndị enyere:
Na-arụpụta ihe eji emepụta dijitalụ
Imewe nke nwekwara
Ya mere, ngwa nke ụdị teknụzụ a enweghị oke. Na mbido, ha lekwasịrị anya na ngwangwa prototyping maka imepụta ụdị, yana n'oge a, a na-etinye ya na ụdị ụlọ ọrụ mmepụta ihe niile, site na ọgwụ, mbara igwe, ejiji, wdg
A na-agbakwunye echiche mmepụta ihe ọkachamara na gburugburu ebe obibi, ma na-ezo aka mgbe niile na usoro iji mepụta ihe site na ịgbakwunye oyi akwa site na akwa nke ihe, na-enweghị ịbanye na teknụzụ eji maka ya. Onweghikwa ihe gbasara ya, enwere ike iji ya si plastik, akwa akwa, na ọla, njikọta, wdg.
Gịnị dị mkpa maka n'ichepụta usoro?
Iji nwee ike mebe usoro ahụ Maka mgbakwunye mmepụta, achọrọ ihe ndị a:
PC nke eji emeputa akuku ma obu ihe nlere anya.
Ngwaọrụ ngosiputa 3D dị mkpa, ma ọ bụ CAD.
Ngwunye ngwa mgbakwunye, ụdị ọ bụla.
Ihe maka layering.
Mgbe emepụtara 3D ma ọ bụ CAD, wee ziga ya iji rụpụta ya, otu ndị na-arụ ọrụ mgbakwunye ga-agụ akụkụ dị mkpa na ọdịdị data sitere na akụkụ ahụ wee bido ịgbakwunye usoro nke mmiri mmiri, ntụ ntụ ma ọ bụ ihe wụrụ awụ na-etolite nlereanya.
Mgbe ejiri ihe wụrụ awụ, enwere ike ịmegharị ya, dịka ọ dị na plastik sitere na ndị na-ebi akwụkwọ 3D nke gbazee na ndị na-emepụta ihe na mgbe ahụ sie ike. Mmiri mmiri ma ọ bụ resins nke a na-etinyezi na usoro ọgwụgwọ UV, mgbakwunye, wdg, ma ọ bụ ntụ ntụ nwere ike iji wee jikọta ya site na mmiri ...
Dịka ọmụmaatụ, enwere ike iji ha site na PLA ma ọ bụ ABS, na eriri anụ ahụ, site na ígwè, na ihe ndị ọzọ, wdg. Ohere di otutu.
A na-eji usoro mmepụta ihe mgbakwunye, dị ka mbipụta 3D, n'ọtụtụ mpaghara. Na ngwa gafere ihe ị nwere ike iche. Examplesfọdụ ihe atụ bụ:
Mbipụta anụ e biri ebi maka nri.
Mbipụta nke akụkụ ahụ dị ndụ ma ọ bụ anụ ahụ maka ngalaba ahụike.
Structures na ụlọ e biri ebi na ihe.
Asọmpi, dị ka nke motorsport imepụta aerodynamic na n'ibu akụkụ ruo ugbu a agaghị ekwe omume. Ọbụna ndị otu F1 na-ewepụta ndị na-ebi akwụkwọ ha na egwu ahụ iji bipụta obere akụkụ ikuku.
Okike nke implants ma ọ bụ prostheses, dị ka ihe maka ịwa ahụ, orthopedics, anatomical model, wdg.
Aerospace mpaghara ebe a na-emepụta ihe eji arụ ọrụ ma ọ bụ akụkụ maka aerodynamics nke ụgbọ mmiri na ụgbọ elu.
Industrylọ ọrụ ụgbọ ala, ịmepụta akụkụ nke ụdị ọ bụla.
Industrieslọ ọrụ ndị ọzọ ịmepụta site na ngwaọrụ ọrụ ọhụụ, gaa n'ụdị ndị ọzọ enweghị ike ịmepụta site na ụzọ ndị gara aga.
Ejiji, iji mepụta ụfọdụ ihe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Nkọwa 3D » Mgbakwunye n'ichepụta: ihe niile ị chọrọ ịma banyere nke a Usoro
SMD ịgbado ọkụ: niile nzuzo nke a modality
Tọghata JPG ka STL online, na-enweghị wụnye mmemme